Wondershare MobileTrans User Guide - Blackberry ndabere ka iOS
MobileTrans Guide: Blackberry ndabere ka iOS
Nzọụkwụ 2. Site na nke a bụ isi Ohere họrọ "Weghachi si Backups", ma họrọ "Blackberry" site nhọrọ nyere.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na iji USB cables. Chere maka Wondershare MobileTrans na-aghọta na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 4.Select faịlụ na ị ga-amasị Nyefee site n'inyocha n'igbe nke ọ bụla faịlụ ụdị. Ị nwere ike pịa "Tinye ndabere faịlụ" ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na ndepụta na ekpe.
Ị nwekwara ike ịhọrọ ikpochapụ data gị iOS ngwaọrụ tupu nyefe. I nwere ike ime nke a site ịlele ahụ "Clear data tupu oyiri" igbe dị n'okpuru ebe ekwentị.
Nzọụkwụ 5. Pịa "Malite Copy" iji malite usoro. Na-iOS ngwaọrụ ejikọrọ site dum usoro.
Ọzọ: Blackberry ndabere ka Android